२६००विन्दु माथि नेप्से, १० अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबारमा नबिल बैंकको सबैभन्दा बढी
२६०० माथिको विन्दुमा नेप्से परिसूचक, १० अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबारमा नबिल बैंकको सबैभन्दा बढी
फागुन ४, काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलवार नेप्से परिसूचक २ हजार ६०१ दशमलव ५१ विन्दुमा पुगेको छ । यो दिन परिसूचक शून्य दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात १५ दशमलव ५० अंकले बढेको हो । २
हजार ६१५ दशमलव ३६ विन्दुदेखि खुला भएको मंगलवारको बजार २ हजार ६३१ दशमलव ३८ विन्दुसम्म पुगेर तल झरेको हो । यो दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि शून्य दशमलव ८७ प्रतिशत बढेर ४७३ दशमलव ५३ विन्दुमा पुगेको छ ।
यस दिन पनि कारोबार रकमले उच्चता कायमै राखेको छ । यो दिन रू. १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख ५४ हजार बराबरको १ करोड ७७ लाख ३२ हजार ७६५ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । मंगलवार २०८ कम्पनीको ७६ हजार ४९३ पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
सोमवारको कारोबार रकमको तुलनामा भने मंगलवार कमि आएको छ । सोमवार ३ दशमलव ७१ प्रतिशत बढेको बजारमा रू. १० अर्ब ३८ करोड ४१ लाख ९७ हजार बराबरको २ करोड २४ लाख ४७ हजार १५७ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
मंगलवार सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार नबिल बैंकको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. ५२ करोड ९९ लाख ९६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको कम्पनीको शेयरमूल्य पनि ३ दशमलव ३३ प्रतिशत बढेको छ । प्रतिकित्ता रू. ४४ ले बढेर कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार ३६५ पुगेको हो ।
यसदिन बैंकिङ समूहको परिसूचक सर्वाधिक २ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले बढेको छ । कारोबारमा आएका १२ ओटा समूहमध्ये बैंकिङसँगै विकास बैंकको शून्य दशमलव २४ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ । यो दिन व्यापारिक समूहको १ दशमलव २८ प्रतिशत, होटलको शून्य दशमलव ६२ प्रतिशत, जलविद्युतको १ दशमलव ३७ प्रतिशत, वित्तको शून्य दशमलव ७८ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको शून्य दशमलव २८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको १ दशमलव ८७ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत र जीवन बीमाको शून्य दशमलव २९ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।
यो दिन चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको शेयरमूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशत बढेको छ भने अन्य पाँच ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएको छ । कारोबारको दोस्रो दिन नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको ९ दशमलव ९८ प्रतिशत शेयरमूल्य बढेको छ ।
त्यस्तै मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको ९ दशमलव ९८ प्रतिशत, कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंकको ९ दशमलव ८७ प्रतिशत, सनराइज फष्र्ट म्युचुअल फण्डको ९ दशमलव ७७ प्रतिशत र हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीको ९ दशमलव ६७ प्रतिशत शेयरमूल्य बढेको छ । सर्वाधिक मूल्य बढ्ने चन्द्रागिरी हिल्सको प्रतिकित्ता रू. २० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २२० कायम भएको छ भने हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ४१ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४५२ पुगेको छ ।
त्यस्तै मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको प्रतिकित्ता रू. १६० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ७६३, कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंकको प्रतिकित्ता रू. ५९ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ६५७, सन्राइज फष्र्टको प्रतिइकाई रू. १ दशमलव १० ले बढेर रू. १२ दशमलव ३६ र हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. २६ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २९५ कायम भएको छ ।
यो दिन साधना लघुवित्तको शेयरमूल्य सर्वाधिक ६ दशमलव १५ प्रतिशत घटेको छ । प्रतिकित्ता रू. ९५ ले घटेर उक्त कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार ४५० कायम भएको हो ।
ज्योति लाईफको आईपीओ शुक्रवारदेखि निष्कासन हुँदै[२०७७ फागुन, २०]
ज्योति लाईफको आईपीओ शुक्रवारदेखि निष्कासन हुँदै